पायल्स लुकाउँदा जीवनभर पीडा - DibyaJyotish (दिव्य ज्योतिष)
पछिल्लो समय ममता र सोहनजस्ता धेरै युवा पायल्सबाट पीडित हुन थालेका छन्। नेपालमा कति मानिस पायल्सबाट पीडित छन् भन्ने यकिन तथ्यांक सरकारसँग नभए पनि अस्पतालमा आउने बिरामीको संख्यालाई आधार मान्ने हो भने यो बढ्दैछ।
‘लक्षण देखिनासाथ अस्पताल गइहाल्नुपर्छ भन्नेबारे धेरै मानिसलाई थाहा छैन, थाहा भएकाहरू पनि लाजले आउन सक्दैन’, काठमाडौं मोडल अस्पतालका पायल्स रोग विशेषज्ञ डा.विजेन्द्रध्वज जोशीले भने, ‘त्यसैले धेरैजसो बिरामी अत्यन्तै पीडादायी जीवन बिताउन बाध्य छन् र उनीहरूको आत्मबलसमेत गिरेको पाइन्छ।’ सकेसम्म यसबाट बच्नु नै उत्तम हुने उनको भनाइ छ।
डा. जोशीका अनुसार पायल्स बादी र खुनी दुई प्रकारको हुन्छ। बादी पायल्समा मलद्वारमा पीडा हुने, चिलाउने वा फुल्ने हुन्छ। खुनी पायल्समा मासुमा दिसा ठोक्किएर रक्तस्राव हुन्छ। पायल्सको पहिलो चरणमा लक्षण दिसा गर्दा गाह्रो हुने, धेरै बेर बस्दा पनि दिसा थोरै मात्र हुने, मलद्वारमा काँडा बिझेजस्तो दुख्ने, चिलाउनेजस्ता लक्षण देखिन्छन्।
दोस्रो चरणमा दिसामा रगत देखिने, दिसा गर्दा मलद्वारमा रहेका नसाहरू फुल्ने, मासुका साना टुक्रा पलाउनुलगायत हुन्छन्। तेस्रो चरणमा धेरै रगत गएर शरीर पहेँलो देखिने, कमजोरी महसुस हुने, रिंगटा लाग्ने, बल गरेर पाद्नुपर्ने अवस्था आउने, अरुचि हुने र दिसा गर्दाभित्रको नरम भाग बाहिर निस्कने जस्ता लक्षण देखिन्छन्।
चिकित्सकका अनुसार मलद्वारमा रहेका नसामा कुनै कारणवश दबाब बढ्यो भने ती फुल्न थाल्छन् अनि कब्जियत र अजीर्णको समस्या बढ्दै गएपछि पायल्स हुन थाल्छ। गर्भवती अवस्थामा हर्मोनको प्रभावले पायल्सको समस्या देखिन सक्छ। संवेदनशील मलद्वारमा हानि पु:याउने, अत्यधिक मदिरापान, नशा लाग्ने चीज, पिरो, अमिलो, चिल्लो, तारेको, मसालेदार खानाले पनि पायल्स बनाउँछ। लामो समय उठिरहनुपर्ने काम गर्ने, श्रम या व्यायाम नगर्ने, राति अबेर बस्नेलाई पायल्स हुन सक्छ।
पायल्स हुँदा के खाने?
पायल्स भएकाहरूले गहुँको चोक्करसहित बनेको रोटी, जौ, पुरानो चामल, रहर, मुगको दाल, तरकारीमा घिरौला, परवल, टमाटर, गाँजर, पालुंगो, फलमा बेल, अनार, काँचो नरिवल, केरा, अमला खानुपर्छ। यस्तै खानासँग मूला खाने, नियमित रूपमा मेवा खाने, करेलाको रस, मोही, धनियाँको रसमा मिस्री मिलाएर खाने र पानी धेरै पिउने गर्नुपर्छ ।
पायल्स हुँदा के नखाने?
भारी, तातो, तिखो पिरो, मसालेदार खाना, बासी, मासको दाल, माछा, मासु, अन्डा, चना, अमिलो भान्टा, आलु, सक्खर, डिब्बा बन्द गरेर बेच्न राखिएका चीज, धेरै चिया, कफी, रक्सी नपिउने, तमाखु, अफिम खानुहुँदैन।
कब्जियत हुन नदिने, व्यायाम गर्ने, दिसा गरेपछि मलद्वारमा जैतुनको तेल लगाउने, शौचालय गइसकेपछि वा सुत्नुअघि तोरीको तेल मलद्वार भित्र दुई तीन चोटी लगाउने, दिसापिसाब आदि नरोक्ने गर्नुपर्छ। यस्तै कठोर आसनमा धेरै बेरसम्म नबस्ने, साइकल धेरै नचलाउने, राति धेरैबेर नबस्ने, व्रत पनि सकभर नबस्ने गर्नुपर्छ। पायल्स भइहाल्यो भने तत्काल शल्यचिकित्सकलाई भेट्नुपर्छ र पायल्सका चरण हेरेर उपचार गरिन्छ।
चिकित्‍सकका अनुसार मलद्वारमा रहेका नसामा कुनै कारणवश दबाब बढ्‍यो भने ती फुल्‍न थाल्‍छन अनि कब्‍जियत र अजीर्णको समस्‍या बढ्द‌ गएपछि पायल्‍स हुन थाल्‍छ। गर्भवती अवस्थामा हर्मोनको प्रधावले पायल्‍सको समस्‍या दरेखिन सक्‍छ।
पहिलो र दोस्रो चरणको पायल्सलाई स्वस्थ खानपान र औषधिले नियन्त्रण गर्छ। पायल्स तेस्रो चरणमा पुगेको रहेछ भने शल्यक्रिया गर्नुको बिकल्प नभएको डा. जोशी बताउँछन्। शल्यक्रिया सफल हुनुमा बिरामीको केसको जटिलता निर्भर हुन्छ।
पायल्स ‘ठूलो भइसकेको अवस्था रहेछ भने, हामीले त्यहाँ फुलेका ठूला नसा काट्नुपर्ने हुन्छ, त्यो जोडिन समय लाग्छ’, डा. जोशी भन्छन्,’त्यस्तो अवस्था आउनुभन्दा पहिले नै शल्यक्रिया गर्नु राम्रो मानिन्छ हैन भने पछि नयाँ मासु पलाउँछ।’
चिकित्सकअनुसार शल्यक्रियाका क्रममा अपनाउने प्रविधिले पनि यसको सफलता निर्धारण गर्छ। विकसित मुलुकमा मेसिनबाट पायल्सको शल्यक्रिया हुने गरेको छ। जुन प्रविधि नेपालका केही ठूला अस्पतालले मात्र अपनाएका छन्। अन्य अस्पतालमा पुरानै प्रविधि (हातले नै शल्यक्रिया गर्ने) बाट पायल्सको शल्यक्रिया गरिन्छ।
१२ घरेलु औषधि प्रयोग गर्नुहोस रोग भगाउनुहोस ..